Life | Page 76 | Home
ဘုဏ်းသိုက်+ချမ်းချမ်း ရဲ့ Life Style Fashion
ဓာတ်ပုံ-လမင်းနိုင် မိတ်ကပ်- Hello (ကျောက်မြောင်း) Location - Home Galaxy ၁။ ဘုဏ်းသိုက်+ချမ်းချမ်း နှစ်ယောက်စလုံးက အိမ်အလှဆင်ရတာ ၀ါသနာပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြင်တွင်းခရီးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြည်ပ ခရီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခရီးသွားရင် အိမ်အလှဆင် ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကိုတော့ မပါမဖြစ်ဝယ်တတ်ကြတယ်လို့ ချမ်းချမ်းမှြေ...
အေးချမ်းလှပတဲ့ နှင်းအငွေ့အသက်တို့ လွှမ်းခြုံနေတဲ့ ရာသီအခါဆီ တစ်ဖန်ပြန်လည်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ ဆောင်းရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အလှတရားကို ဖော်ကျူးနေတဲ့ နှင်းပွင့်နှင်းခဲလေးဖြစ်တည်ရာ ကမ္ဘာဒေသအချို့မှာလည်း ခမ်းနားလှပတဲ့ နှင်းရေခဲပွဲတော်တွေဟာ တစ်ကျော့ပြန်လည် သက်ဝင်လာဖို့ တာစူနေပါပြီ။ ဒီဆောင်းမှာတော့ ကမ္ဘာပေါ်က...
အရသာရှိတဲ့ ဟင်းလျာတွေကို စားသုံးရတာဟာ စိတ်ကိုပျော်ရွှင်စေပါတယ်။ အနံ့အရသာမှာရော အပြင်အဆင်မှာပါ သဘော ကျနှစ်သက်စရာလေး ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း Eating in Style ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း စတိုင်လ် ဆန်းနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ ရှယ်အရသာဟင်းပွဲလေးတွေကို ပရိသတ်ကြီးအတွက် တွဲဖက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ပျေ...
မြန်မာ Poeple မဂ္ဂဇင်းရဲ့ စတိုင်လ်မိုက်သူတွေ စိန်ခေါ်ပွဲကြီးမှာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ Miss People 2013 Winner များရဲ့ အလန်း စားစတိုင်လ်ပုံရိပ်တွေကို တင်ဆင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုပုံရိပ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက် မေတ္တာနဲ့ရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့ Photographer - HAK ၊ ဒီဇိုင်နာ မမေမျိုးနဲ့ Yangon River Cruise အပျော်စီးသင်္ဘေ...
Downside (noun) - အခြေအနေတစ်ရပ်၏ အားနည်းချက် The downside of living here, of course, is that it is expensive. Unemployment, inflation and greater inequality are often the downside ofamarket economy. Downsize (verb) - ၀န်ထမ်းအင်အား လျော့ချခြင်းဖြင့် ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့...